Gadzirira yakanakisa yemidziyo madhishi ne Mapoka kubva kuEmilia | Ndinobva mac
Gadzirira yakanakisa yemidziyo madhishi ne Mapoka kubva kuEmilia
Hongu, mazuva mashoma apfuura takataura nezvechikumbiro kubva kune vakagadziri vamwe, Emilia, chikumbiro chakatibvumidza kugadzirira madhishi anoshamisa evagani, uko zvigadzirwa zvemhuka zvakatangira uye zviri pachena kuti hapana mhando yenyama inoonekwa chero kupi. Asi nepo varimi venyama vachifunga kaviri uye vachida kutora vegan nzira yekudya, muSoy de Mac, tinotaura zvakare nezve chikumbiro chinotibvumidza kugadzira mabikirwo evanodya nyama, uko nyama isingawanikwe. Ramba uchifunga kuti chikafu chemidziyo chinotipa imwe nzira kana zvasvika pakushandisa huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa, saka hatidye madhishi akadaro, akadai sevhegi.
Mapoka aEmilia, chishandiso chine mutengo wenguva dzose muMac App Store ye0,99 euros, asi kwemazuva mashoma inowanikwa kuti utore mahara. Ichi chishandiso chinotipa isu mabikirwo ayo, mukuwedzera kune kuve anokodzera varimi, ari mashoma mumafuta uye shuga. Mapeji ese akapatsanurwa nezvikamu zvichienderana nerudzi rwechikafu chatinoda kugadzirira, kunyange hazvo zvimwe zvikamu zvisisina chinhu, senge Cheese madhishi, asi mushambadzi anoti ari kuzvishandira kuti agone kuwedzera madhishi matsva uye mabikirwo.
Ese maresipi akakurumidza uye nyore kugadzirira, izvo zvinotitorera isingasviki maminetsi makumi matatu imwe neimwe. Kufanana neapp kubva kune imwechete yekugadzira vegans, dhizaini inosiya zvishoma kuti zvidikanwe, asi tichifunga kuti rakashandurwa zvachose muchiSpanish uye kuti rinoita zvarinotaura, chishandiso ichi chakanakira kana tiri varimi uye hatina nguva yekumira tichifunga kuti tinoda kubika nhasi tichitevedzera gwaro rezvinomera nguva dzose. Mapepa aEmilia anoda macOS 10.12 kana gare gare uye 64-bit processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Gadzirira yakanakisa yemidziyo madhishi ne Mapoka kubva kuEmilia
Kuenda kuApple Chitoro, chimwe chikamu pane webhusaiti yeApple
Jimmy Iovine anopa hurukuro nyowani nezve Apple Music uye chikamu